पतिले आत्महत्या नगर भन्दाभन्दै पत्नीको मृत्यु, विवाह गरेको एक वर्षमै बिछोड ! | समाचार
September 20, 2021 NepstokLeaveaComment on पतिले आत्महत्या नगर भन्दाभन्दै पत्नीको मृत्यु, विवाह गरेको एक वर्षमै बिछोड !
विनोद विवाह गरेर रोजिनालाई घरमा राख्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका थिए । त्यहाँ काम गरिरहेका उनले शनिबार बेलुका रोजिनासँग फोनमा कुरा गरे । रोजिना पनि शनिबार सलकपुर बजारमा किनमेल गरेर फर्किएकी थिइन् । विनोदसँगको कुराकानीमा रोजिनाले पटक–पटक आफू पीडामा रहेको भन्दै आत्महत्या गर्ने निर्णय सुनाइन् ।
रोजिनाले पीडाको विषयबारे कुरा गरिनन् । आत्महत्या गर्ने रोजिनाको निर्णबारे सुरुमा त विनोदले विश्वास गरेनन् । तर पटक–पटक उनले म मर्छु भनेपछि विनोदले सम्झाए । अनेकन आग्रह गरे । तर रोजिनाले ढिपी कसिरहिन् । कुराकानीपछि विनोद सुते । बिहान फोन गरे । उठेन । म्यासेज पठाए । जवाफ पाएनन् । अनि अकाउन्ट खोलेर हेरे । त्यहाँ पनि अनलाइन पाएनन् ।
एकैछिनमा परिवारबाट फोन आयो । परिवारले रोजिना रहिनन् भन्दा विनोद छाँगाबाट खसेजस्तो भए । अनि उनलाई परिवारले रोजिनाको माइतीपक्षमा सूचना पुर्‍याइदिन भने । विनोदले सोहीअनुसार माइती पक्षसँग कुरा गरे । उनीहरूको दुई परिवारबीच सम्धीभेटसमेत भएको थिएन । यसैले उनीहरूबीच प्रत्यक्ष कुराकानी हुन नसकेको बताइन्छ ।
यता, माइती पक्षले रोजिनाले आत्महत्या गरेको नभई हत्या हुनसक्ने आँकलन गर्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् । रोजिनाकी ठुलोबुबाकी छोरी (बहिनी) मनीषा क्षेत्री केटिएम दैनिकसँग भन्छिन्, ‘मलाई पनि हिजो बिहान यसबारे खबर आयो । तत्काल भिनाजू (विनोद) लाई म्यासेज पठाएँ । उहाँले फोनमा रोजिनाले छोडेर गएको भन्दै विरह पोख्नुभयो । तर उहाँको पनि निष्कर्ष आत्महत्या नै हो भन्ने छ । तर दिदीको अनुहार र शरीरमा निलडाम छ ।’
उनका अनुसार हालैमात्र उनीहरूले सलकपुरको उक्त घर बेचेका रहेछन् । घर बेचेको पैसामा किचलो हुँदा हत्या भएको हुनसक्ने उनको आशङ्का छ । ‘त्यस्ती सोझी मेरी दिदीले त्यस्तो कठोर निर्णय लिन सक्दिनन्’, उनले भनिन्, ‘भिनाजु पनि आज फर्किँदै हुनुहुँदोरहेछ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थप सत्यता बाहिर आउला । तर उनको हत्या भएको हुनुपर्छ ।’
२४ वर्षीया रोजिना गिरी (काफ्ले) मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरमा आइतबार बिहान आफ्नै घरको कोठाभित्र मृतावस्थामा फेला परेकी थिएन् । हिजो बिहान ७ बजेतिर कोठाभित्र चुकुल लगाएको अवस्थामा उनी मृत फेला परेको सुन्दरहरैँचा– ८ का वडाध्यक्ष खेमप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मृतक रोजिनाको अनुहारमा निल डाम छ भने शरीरमा पनि चोट देखिएको बताइएको छ । आइतबार नै शव पोस्टमार्टमका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका इन्स्पेक्टर सरोज खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज शवको पोस्टमार्टम हुनेछ । रिपोर्ट आएपछि घटनाको विवरणबारे जानकारी पाइने उनले बताए ।
शवको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या गरेको हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाएर लोबेडमा घोप्टो परेको अवस्थामा मृत भेटिएको उनको भनाइ छ । शरीर लोबेडमा रहेको भएपनि फेनमा सल बाँधिएको र कोठाको चुक्कुल भित्रबाट लगाएको पाइएकाले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले भने झुण्डिएका कारण रगत सोहोरिएर निलडाम हुनसक्ने जनाएको छ ।
यता, माइतीपक्षले भने रोजिनाको आत्महत्या नभइ हत्या भएको हुनसक्ने आशङ्का गरेको छ । अनुहारमा निलडाम प्रष्ट देखिएको र शरीरमा पनि डाम देखिएकाले आत्महत्या नभइ हत्या हुनसक्ने माइतीपक्षको आशङ्का छ । मृतकको शव ओछ्यानमा घोप्टो परेको अवस्थामा फेला परेको र शरीरमा पनि निलडाम देखिएको हजुरबुबा यामकुमार गिरीले बताए ।
माइती पक्षले घटनाको अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग राख्दै परिवारका तीन जना सदस्यविरुद्ध किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको लिपिङ पुलसँगैको सडक भाँसिदा टिचिङ र वीरका अक्सिजन प्लान्ट तातोपानीमै रोकिए